China SLA-310 Round Bottle nkqo Ukuphawula Machine Ukwenza kunye Factory | I-S-conning
Ukutya nkqo kunye neNkqubo yokuPhawula
S310 Ukutya okumi nkqo kunye neNkqubo yokuPhawula: Kufanelekile: ileyibheli ezenzekelayo kwizikhongozeli zokupakisha zezilinda kumachiza amayeza, imichiza yemihla ngemihla, kunye nokutya
-Ingcaciso epheleleyo yetreyi yokulayisha nkqo, okanye ukuhambisa okuzenzekelayo kunye neelebheli kumgca wokugcwalisa.
-Ukuhlela isantya esiphezulu kokuma okuphezulu.
Lokondla nkqo yenza kube lula ngakumbi ukubeka izinto, ukunciphisa kakhulu amandla abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza.
-Iibhola okanye ezinye iidayimitha: Ф20-90mm, ukuphakama: 30-200mm encinci ibhotile ejikelezayo izitikha ezijikelezayo zinokuxhotyiswa ngesondlo sokondla, ngokuzithandela, ukuqonda ukondla kunye nokuhambisa
Isikali esahlulahlula ibhotile: Isikrufu sahlula iibhotile ngamanani alinganayo kwaye singena kwisikhululo sokuphawula; i-roller star kunye nebhotile ejijekileyo ibhanti ephumeza ukubeka imigca emithathu emzimbeni webhotile ukuqinisekisa ukuchaneka kwelebheli; ileyibheli ethe nkqo inokugqibezela i-inkjet, ukufunyanwa kwe-inkjet, ukufunyanwa kweelebheli ezingekhoyo, ukwaliwa kweemveliso ezingafanelekanga, njl.
Inkqubela phambili yeNkulumbuso
Ibhanti yokubuyisela: Iqhutywa yimoto eyahlukileyo kwaye inokuhlengahlengiswa ngokungaguquguqukiyo kukuguqulwa kwamaza.
Ngokukhawuleza kwelebheli, iileyibhile igqibelele kwaye ayinamibimbi, kwaye yenzelwe ukuthintela ngokufanelekileyo iingxaki ezinje ngokulahleka, ukungalunganga, kunye nokuncamathelisa kwakhona okunokubangelwa kukurekhodwa kwelebheli.
* Inkqubo yokuhlola iMuti-ekrelekrele igqibelele isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nozinzo.
* Oomatshini bokulebhelisha abagqibeleleyo bamkela i-SUS304 intsimbi engenasici kunye namandla aphezulu e-aluminium alloy yokuthotyelwa kwe-cGMP, i-FDA, i-OSHA, i-CSA, i-SGS kunye ne-CE.
Iroli yokuqhuba iEmery
Isondo lokuqhuba lenziwe ngezinto zesinyithi zegolide, ezinokuxubana okuphezulu kwaye zingaze zityibilike, ziqinisekisa ukuchaneka okungapheliyo kokuhanjiswa kwelebheli. Igolide yentsimbi iyinto enxibayo, kwaye iyakoyisa ukutyibilika nokubaleka kwelebheli xa irabha okanye intsimbi inxitywa ngokulula. Into ekhethekileyo.
Umatshini wokunyathela oshushu: wamkela isantya esiphezulu sokufaka iikhowudi kwimimoya, isantya esiphezulu sinokufikelela amaxesha angama-500 ngomzuzu. Uhlengahlengiso lwe-azimuth lusebenzisa uhlengahlengiso lwesikere, ekulula kwaye kulula ukulungelelanisa ulungelelwaniso.
I-HP yokukhetha isisombululo esiphezulu se-inkjet yokuprinta kwi-intanethi yezigaba ezintathu zekhowudi
1-20ml 7-20ml ezineengqayi, ezineengqayi, ulwelo yomlomo, kunye nezinye iimveliso ibhotile ngeenxa zonke, izixhobo ezifanelekileyo iilebhile ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo kunye noshicilelo kupakisho.
Ubukhulu L2100mm × W1230 × H1400mm
Ubungakanani besikhongozeli ubukhulu: Ф28-120mm
Isantya Ibhotile ye-20-120 / ngomzuzu (kuxhomekeke kubungakanani bebhotile kunye nobude belebheli)
Ukuchaneka kwelebheli ± 0.5mm
Egqithileyo Ukuthengisa okuTshisayo kweNkqubo eNtsha yokuPhawula iChina eTshayina yoFakelo oluzaliswe kwangaphambili ngeBar yokuZenzekelayo yeTorsion Bar
Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo,